समाचार – Page 3053 – Fewa Times
प्रहरी आफैँ भूकम्पपीडित !
१२ वैशाख, काठमाडौं । भूकम्पका बेला हजारौंलाई उद्धार गरी राहत वितरणमा स्वत स्फूर्त खटिएर प्रशंसा कमाएका सुरक्षा निकाय एक वर्ष बित्दा पनि आफैँ भूकम्पपीडित बनेका छन् । उपत्यकाकै प्रहरी कार्यालयहरुसमेत एक वर्षपछि टेन्ट र पार्टी प्यालेसबाट संचालन भइरहेका छन् । आजको नयाँ पत्रिकादैनिकमा समाचार छ......
१२ वैशाखमा १६ सदस्य गुमाएका विष्णुमान भन्छन्, ‘एउटा मान्छेको जीवनमा सम्भवतः यसभन्दा अर्को दुखान्त के हुन सक्छ र ?
वैशाख१२, काठमाडौं–न्युयोर्क ज्याक्सन हाइटको ‘बेसमेन्ट’ स्थित ट्राभल एजेन्सीको कार्यालयमा सधैंझैं विष्णुमान प्रधान सहज र सरल देखिन्थे । कुराकानीको विषय प्रस्टाएपछि उनले भित्रबाट ढोकाको चुकुल लगाए । ‘आँखामा आँसु नै रित्तिइसक्यो । सपनाजस्तै लाग्छ, कहिलकाहीं । खै के भनौं,’ कुराकानीको सुरुमै उनको......
बार्सिलोनाको अर्को शानदार जित, स्वरेजले गरे चार गोल
१२ वैशाख, काठमाडौं । लुइस स्वरेजले चार गोलगरेपछि बार्सिलोनाले स्पोटिङ गिजोनमाथि शानदारजित हात पारेको छ र फेरि शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ । शनिबार राति भएको खेलमा बार्सिलोनाले अन्तिम १० खेलमा सिमित स्पोटिङ गिजोनलाई ६-० गोलको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको हो । घरेलु मैदान नाउ क्याम्पमा भएको खेलमा......
नुवाकोट केन्द्रबिन्दु बनाएर ४.२ रेक्टरको भूकम्प
१२, वैशाख, काठमाडौं । शक्तिशाली भूकम्प गएको वर्षदिन पुगेकै दिन नुवाकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर पराकम्प गएको छ । राति २ बजेर १६ मिनेटमा नुवाकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाउँदै ४ दशमलब २ रेक्टर स्केलकको पराकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ । यससँगै बारपाक केन्द्रबिन्दु बनाई भूकम्प गएको......
किन आउँछ डन्डीफोर र कसरी हटाउने ?
युवा अवस्थामा प्रवेश गरेपछि मानिसको अनुहारमा डण्डीफोर आउँछ । यसले कतिपय युवायुवतीको अनुहारै कुरुप बनाइदिन्छ । डण्डीफोर आउँदा खानेकुरा बार्नु पर्छ भन्ने छैन । तर चिल्लो पदार्थ धेरै मात्रामा खाने र राती ढिलोसम्म बस्नाले डण्डीफोर फैलन सहयोग पुग्छ । उमेरले आउने डन्डिफोर एकपटक आउछ, हराएर जान्छ । आफैँ......
गाउघरमा महिलाको पिडा : आङखस्ने (पाठेघरको) समस्या (लाजले लुकाउदा बल्झिएको पिडा)
पाठेघर खस्नुका कारण के ? के हुन् त बच्ने उपाए ? गाउँका महिलालाई मात्रै त हो नि आङ खस्ने, शहरमा त कसैको पनि खस्दैन” स्वास्थ्य सेवा विभागको कार्यालयमा एक बैठकको सन्दर्भमा एक पुरुष सहभागीले प्याच्चै बोले, जुन व्यक्तिको पाठेघर नै छैन । अर्को एक महिला सहभागीले त्यसको जवाफ लगाउँदै भनिन्, “कहाँको महिलाको खस्छ......
मालिकसँगको अवैध सम्बन्धका कारण युवतीले गरिन् आत्महत्या
11 वैशाख, धनगढी । विवाह गर्ने प्रलोभन देखाई राखिएको अवैध शारीरिक सम्बन्धपछि रहेको गर्भका कारण नै यहाँ एक युवतीले आत्महत्या गर्नुपरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । स्थानीय आसिस मोबाइल ग्यालरी पसलमा काम गर्दै आएकी २५ वर्षीया मेनकाकुमारी चौधरीले वैशाख २ गते बिहान मोबाइल पसलमै झुन्डिएर आत्महत्या......
लासमाथि टेक्दै ४ महिनामा अमेरिका पुगेकी नेपाली चेलीको बयान
कतै जंगलमा लास टेक्दै, कतै अग्लो बार नाघ्दै यो यात्रा वृतान्त हो सिन्धुपाल्चोककी ३० वर्षीया युवती रमिला श्रेष्ठ (नाम परिवर्तन) को । उनी ४ महिना लगाएर यसै साता अमेरिका आइपुगेकी छन् । निकै जोखिमपूर्ण उनको यात्रा क्रिस्टोफर कोलम्बस या भास्को डि गामाको भन्दा कम रोचक र साहसिलो छैन । रमिलालाई दलालले २३......
संसारभर चिनिए सोनिश, तर परिवारको दुःख ज्यूँका त्यूँ
१० वैशाख, काठमाडौं । नेपाली सेनाका जवानले धुलो टक्टक्याउँदै एक दुधे बालकलाई भग्नावशेषबाट निकालेको तस्वीर गत वैशाख १२ मा आएको भूकम्पको एउटा बिम्बका रुपमा स्थापित छ । ती दुधे बालक, सोनिश अवाले, अहिले टुकुटुक हिँड्ने र तोतबोली बोल्ने भइसकेका छन् । त्यतिबेला पाँच महिना पनि नपुगेका सोनिशलाई भूकम्प......
धरहराबाट खसेको जोडी धरहराकै ठुटोमुनि
पोहोरको भूइँंचालोमा धरहराबाट खसेका एक जोडी एक वर्षपछि त्यही धरहराको ठूटोनेरि भेटिए । उनीहरु दुवै थकित देखिन्थे । वैशाख १२ नजिकिँदै गर्दा सञ्जीव श्रेष्ठ र रमिला श्रेष्ठ सोह्रश्राद्धको पुरेतजस्ता भएका छन् । हामीभन्दा अगाडि दुई समुहले अन्तर्वार्ता लिइसकेका थिए । हामीपछि एउटा समूह पर्खाइमा थियो ।......